Frosted / Matte Acrylic Sheet, China Frosted / Matte Acrylic Sheet Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Jumei Acrylic Kugadzira Co, Ltd.
Imba>chigadzirwa>Frosted / Matte Acrylic Sheet
Frosted Cast acrylic sheet ine matte kupedzisa rimwe divi kana mativi ese uye inowanikwa munzvimbo dzakasiyana siyana dzinokatyamadza mavara kuti akwane zvese dhizaini dhizaini.
Frosted acrylic sheet inowanikwa mumatope kubva pa2mm kusvika pa30 mm, uye akajairwa masheetti ari 1220 × 2440mm uye 2050 × 3050mm yesarudzo dzako.
Kupedzisa kwedu kwechando kuri pachena, zvese kubva pameso uye nekubata.
Saizi yakaenzana 1220*1830, 1220*2440,1270*2490, 1610*2550,1440*2940, 1850*2450, 1050*2050,1350*2000,2050*3050,1220*3050 mm
Wepamusoro-giredhi yakakanda acrylic machira akagadzirwa kubva chete 100% mhandara mbishi zvinhu.
Ese maacrylic machira akaputirwa neUV, anovimbisa machira kuti haachinje kana uchishandisa panze, anogona kushandisa kunze kwemakore 8-10.
Hapana hwema kana uchivacheka ne laser kana CNC muchina, nyore kuvhunika uye kuumbika.
Dzivirirapepa iri kupinza, mukobvu uye nyore kubvisa, hapana guruu yakasara.
Yakanakisa kusimba kutsungirira uye kukwana kwakaringana.